I-China Deluxe Spring ebhijelwe ngentambo yeLanyard Cord yokuNamathisela ukuHanjiswa kweZandla eziSimahla zaManzi kunye neFektri | Spocket
Ngamanye amaxesha, sasibiza i-lanyard elula, isixhobo esine-bungee lanyuard sesona sitayile sithandwayo kwindawo yokhuseleko, kananjalo ngenxa yokuguquguquka kwayo. I-OEM nayiphi na imibala ngokokuthanda komthengi, kunye nokuqina okuphezulu kunye neendlela ezininzi zokudibanisa, yindlela elula neyoqoqosho yokuqalisa ngesixhobo sokulungiselela. Ngapha koko, iyafumaneka ngomsebenzi onzima okhawulezayo wokuqhagamshela iibhaksi ezenziwe ngentsimbi engena-stiainless okanye i-aluminium yokuhamba ngenqwelomoya, emva koko yenza i-lanyard enye esebenza ngezixhobo ezininzi kwizicelo ezininzi.
Umthengisi othe ngqo waseTshayina ovela eTshayina, unamava obuchule kule ndawo. Yamkelekile i-OEM okanye i-ODM, i-SpocketGuard eboshwe nge-lanyards kwipakethe yohlobo lwayo iyafumaneka, thetha nathi ngoku!
Isixhobo se-Super Duty Coil seLanyard
TPU kunye nezinto zentsimbi ezingenasici
Igcina imemori yekhoyili
Intambo ye-2.0mm, intambo ye-5.0mm, i-coil ye-23 / 28mm, ubude be-125 / 120mm
Imibala edumileyo ibandakanya emnyama emnyama, ebomvu, eluhlaza, luhlaza, nepinki
Yenziwe ngentsimbi eshayinayo 2 snap hook (6x60mm)
Ukwaphula ubunzima - 100kg
Ngokuqhelekileyo iyafumaneka emnyama, eluhlaza okwesibhakabhaka, eluhlaza, ebomvu
I-oda elungiselelwe wena elingu-500pcs ngombala ngamnye
Ukusebenza kwiindawo eziphakamileyo, ukunyuka, ukucima umlilo, ukunyusa intaba, ukusebenza kweoyile, ukusika, ukukhukhula, amandla ombane
Zikhuselekile kakuhle izixhobo zakho, kunye nesisombululo esifanelekileyo kunye nokukhetha okugqibeleleyo kwiibhanti zomsebenzi okanye iibhanti zewrists.
Le nkqubo yekhoyili iphantsi inciphisa ukubambeka, ivumela izixhobo zokufikelela ngokupheleleyo kunye nokusebenzisa ngaphandle kwayo nayiphi na into egxothiweyo.
Ikhoyili ibandakanya umsebenzi osisigxina we-7 * 7 osisiseko sentsimbi ukubonelela ukomelela okomeleleyo kunye nokhuseleko olongeziweyo.
Ilungele ukusebenza kwiindawo eziphakamileyo ngezixhobo ezinobunzima besandla, ukuthintela ukonakala kwesixhobo okanye ukubuza kwakho.
Ukwaleka okungaphezulu kwe-DB kwi-2.5kg coil lanyard kuthintela ukinking, ukumelana nobushushu kunye nemiphetho ebukhali.
Iyahambelana ne-tether-ready scaffold spanner njengesiqhelo.
Zilungele amabhanti, iihalsters, iipakethi kunye neehashe.
Intambo yeCingo engenazingcingo ekhethekileyo yeCoil Lanyard:
Ulwakhiwo Ububanzi (mm) Ukwaphula Amandla (KG)
1. Ngaba unayo uphawu lwakho?
Ewe sinegama lophawu lwaseburhulumenteni, iSpocketGuard.
2.Ngaba singayilungisa uyilo lwethu?
Ngokuqinisekileyo kunjalo. Samkela i-OEM / i-ODM, ye-coil lanyard, ilogo eyenziwe ngokwezifiso, ubungakanani, umbala, isixhobo kunye nokupakisha zonke ziyafumaneka.
3.Ngaba singafumana isampulu yasimahla yokujonga umgangatho?
Ngokuqinisekileyo, akukho ngxaki. Njengesiqhelo, ukuba isampulu esitokhweni, sinikezela ngesampulu simahla ngeentsuku ezi-1-3. Ukuba ufuna isampuli entsha yesiko, uya kucela intlawulo ngaphakathi kweentsuku ezingama-5-7. Kwaye ukuvakalisa ukuthunyelwa kwesampulu kuya kuba kwiindleko zomthengi.
4. Liliphi ixesha lokuhanjiswa kwee-odolo ze-OEM?
Kuxhomekeke kubungakanani be-odolo yakho, ngesiqhelo kwi-3-20 yeentsuku emva kwesampulu evunyiweyo, i-7-15days emva kokufika kwentlawulo.
5. Yintoni ixesha lokuhlawula?
Samkela i-T / T, i-Western Union kunye ne-Paypaly paymnet yee-odolo ezincinci.
6. Zeziphi iindlela ohambisa ngazo eziqhelekileyo?
Ngokuqhelekileyo ngokubonisa njenge-DHL, i-FedEx, i-UPS okanye i-TNT, ngomoya okanye ngolwandle konke kugqitywe ngokomyalelo we-qty.
Ukuphendula ngokukhawuleza ngaphakathi kweeyure ezingama-24 ngazo naziphi na iimfuno kunye nemibuzo
Iqela lokuthengisa lobuchwephesha phantse iminyaka eli-15, nceda ukusombulula nayiphi na into oyicelayo
Ulawulo lomgangatho ophezulu lufumana igama elihle ngakumbi kwiimarike zakho
Ixabiso le-china lomzi-mveliso ngentlawulelo yemithwalo yempahla kukhuphiswano lwakho ngokubanzi
Siya kubonelela abathengi bethu nokufakwa kwesiko kunye nesiphelo ngokwemiqathango yazo
Sizimisele kwaye siyakwazi ukwenza umgama owongezelelweyo ukugqitha kulindelo lwabathengi bethu.
Okulandelayo: Ukolulwa okubonakalayo okungumthwalo onzima weplastiki yentsimbi yoKhuseleko oluPhezulu sisiXhobo seLanyard Cord
Steel Isixhobo Ukhuseleko Spring yenkomo Release Quick ...